Ekpere nye Virgen del Carmen. ? Maka okwu siri ike na Nchedo
Ekpere nye Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke nke Carmen, enweghị ọnọdụ siri ike nke a na-enweghị ike ikpe ya na otu ikpe ekpere nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke Carmen Ọ bụ atụmatụ nke itinye uche na ọtụtụ oge anyị kwesịrị iche ụbọchị kwa ụbọchị, maka na anyị amaghị oge anyị ga-ebi ihe siri ike ma ọ dị mma ka egbochi anyị.
Ekpere bu ngwa agha di ike nke anyi puru iji oge obula anyi choro.
A na-ele nwa agbọghọ a na-amaghị nwoke anya dị ka ihe siri ike na nke a bụ n'ihi na ọ bụ ọrụ ebube na azịza nwere ike ịmalite ịhụ ya na nkeji ole na ole mgbe o kpesịrị ekpere, nke a bụ ikpe n'ọtụtụ oge.
Knowingmara na anyị nwere onye nọ n’eluigwe nke na-aghọta anyị ma nweekwa ike ịkwado anyị n’ọnọdụ ọ bụla na-eme ka anyị nwee udo na ntụkwasị obi na ihe niile ga-adị mma.
1 Ekpere nye Virgen del Carmen Onye bu Virgen del Carmen?
1.1 Ekpere nye Virgen del Carmen maka okwu ikpe
1.2 Ekpere nke Virgen del Carmen maka mmụta na nchekwa
1.3 Ekele n’ekele na onyinye
1.4 Ekpere Virgen del Carmen iji ruo n’ịhụnanya ya
Ekpere nye Virgen del Carmen Onye bu Virgen del Carmen?
Mara dị ka Nwanyi anyi nke Carmen, o bu otu n’ime nkwado nke enyere Meri Nwaanyi. Aha ya sitere n’ugwu Kamel n’Israel nke putara Ubi.
Ná mba ụfọdụ, a na-ahụta ya dị ka onye nchebe nke oké osimiri na ndị ọzọ, dịka na Spain, a na-ahụta ya dị ka onye nchebe nke Armada Spanish. Ekwuru na n’afọ 1251 nwa agbọghọ a na-amaghị nwoke pụtara n’ihu Saint Simon Stock bụ onye isi ndị ọchịagha nke Usoro.
Na nnọkọ ahụ nwoke ahụ nyere ntụpọ na omume ya, akara abụọ nke ihe a maara dị ka ofufe Marian nke ndị Carmel gburugburu ụwa.
Ikwanye ugwu nye Meri nwanyị bụ omenala ụka ụka Katọlik nke na - akọwapụta mkpa nwa agbọghọ na - amaghị nwoke na ọbịbịa nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dịka ụdị mmadụ n'ụwa a.
Ngwá ọrụ nke Chineke Nna mezuo ebumnuche Chineke ruo taa.
Ekpere nye Virgen del Carmen maka okwu ikpe
Enwere m ihe isi ike puku: nyere m aka.
Si n'aka ndị iro nke mkpụrụ obi: zọpụta m.
Na mmejọ m: mee ka m mara ihe.
N’ujo m na uju m: gwaa m.
Na ọrịa m: mee ka m dị ike.
Mgbe ha ledara m anya, kasie m obi.
Na ọnwụnwa: chebe m.
N'oge awa siri ike: kasie m obi.
Jiri obi nne gị: hụ m n'anya.
Jiri ike gị dị ukwuu: chebe m.
Na ogwe aka gị mgbe ọ ga-agwụ: nabata m.
Nwa agbọghọ nke Carmen, kpee ekpere maka anyị.
Dịka nne, Nwa agbọghọ amaghị nwanyị maara nhụjuanya ọ bụụrụ onye ọ hụrụ n'anya nọ n'ọnọdụ dị ize ndụ.
O tozuru oke ma nwee ikike ịkwado ihe ndị dị anyị mkpa tupu Onye Okike Chineke nke ihe niile.
Ekpere e ji okwukwe si na mkpụrụ obi dị rụọ ọrụ dị mma, anyị enweghị ike jụọ ma anyị ekwenyeghi na ọrụ ebube anyị na-eche ka enwere ike inye anyị, n’agbanyeghi o siri ike n ’obi anyị na nke a ga - ekwe omume, cheta na mgbe anyị n’ekpe ya ọ bụ n’ihi Anyị na-arịọ maka ihe mmadụ ga-enweta ga-ekwe omume n'ụzọ eke.
Ekpere nke Virgen del Carmen maka mmụta na nchekwa
Nwa agbọghọ nwanyị dị nsọ nke Carmen! Nne nke Onye nwe anyi Jisos Kraist na onye n’echebe ndi nile n’iru gi.
Taa ana m ekpe ekpere n’ihu uwe gị dị ebube ka ị na-enye m ihe nghọta mgbe niile N’okporo ụzọ dị njọ nke ndụ a nke m nwere ike ịkpafu na-enweghị enyemaka gị.
Gbaghara mmehie m niile, achọpụtara m gị nke ukwuu. Ana m akwanyekwara gị ùgwù kwa ụbọchị. Ahapụna m n'oge mmejọ: N'enweghị enyemaka gị, m ga-abụrịrị atụrụ na-enupụ isi.
Rịọ maka ọkụ ma chebe anyị, maka onye ezin’ụlọ ma ọ bụ ọbụbụenyi pụrụ iche abụghị ihe ọhụrụ.
N'ezie a na-atụle otu n'ime arịrịọ ndị a na-arịọkarị mgbe ọrụ ebube ike gasịrị.
Ọ bụ ihe dị njọ inwe ahụghị ụjọ ma ọ bụ nwee nhụsianya n'ime ụwa ebe o yiri ka ihe ọjọọ na-aga n'ihu, ọ bụ ya mere ịrịọ arịrịọ Virgen del Carmen ma ọ bụ senti ọ bụla ọzọ nwere ike inyere anyị aka bụ ọrụ ebube.
Ekele n’ekele na onyinye
Nwa agbọghọ nwanyị dị nsọ nke Karmen!
Anyị enweghị ike ịzaghachi ugwu maka amara na ekele nke inyeworo anyị site n'inye anyị Scapular nsọ gị.
Nabata ihe dị mfe nghọta, mana nke miri emi, ekele na, ebe ọ bụ na anyị enweghị ike inye gị nke kwesịrị gị na ebere gị.
Anyị na-enye obi anyị, na ịhụnanya ya niile, na ndụ anyị niile, nke anyị chọrọ iji n'ịhụnanya na ijere Ọkpara gị, Onyenwe anyị, na ịgbasa ezigbo ofufe gị ...
Na-achọ ka ụmụnna anyị niile nọ n'okwukwe, onye Providence na-eme ka anyị dịrị ndụ ma na-esokọ, na-akwanye ugwu ma na-ekele onyinye gị dị ukwuu, na-eyi Scapular Holy, na anyị niile nwere ike ịdị ndụ ma nwụọ n'ịhụnanya na nraranye gị.
Virgin nwere mmasị na nwanyị Virgin nke Camen ekpere ekele na inye onyinye?
Ọtụtụ mgbe anyị na echefuru ekpere otu ugboro anyị nata ihe anyị na-arịọ mana nke a ekwesịghị ịdị.
Bible na-akọ akụkọ banyere ndị na-enweghị ekele na ndị ọzọ mere ekele.
N’otu aka ahu na onyinye anyi n’eme, anyi na echefu ihe obula ma anyi nwee ihe anyi choro.
Ikpe ekpere n’ekele bụ ihe mmegharị nke a na-agaghị ahụ n’eluigwe. Mgbe anyị na-enye onyinye ma anyị anaghị emezu ya, ọ na-egosi na mbara igwe.
N’agbanyeghi oge o ghaghi inye ekele ma obu nye ihe ikwuru gi nkwa, ihe di nkpa bu ime ya.
Ekpere Virgen del Carmen iji ruo n’ịhụnanya ya
Oh Nwa agbọghọ nke Carmen, Mary kacha Nsọ!
Creature bụ onye kachasị mara mma, onye kachasị ebube, nke kachasị ọcha, mara mma kachasị mma na nke kachasị mma.
Asi na ndi mmadu nile mara gi, nne m na nne m, ma oburu na ndi mmadu huru gi n’anya dika ikwesiri!
Mana enwere m nkasi obi n’ihi na ọtụtụ mkpụrụ obi gọziri agọzi n’eluigwe na n’elu ụwa na-ahụ n’anya na ịdị mma na ịma mma gị.
Ana m a gladụrị ọ moreụ karịa n'ihi na Chineke hụrụ naanị gị n'anya karịa mmadụ niile na ndị mmụọ ozi ọnụ.
Nwanne m nwanyị kachasị hụ n’anya, mụ onwe m, onye mmehie obi jọrọ njọ, ahụkwara m gị n’anya, mana ahụrụ m gị n’anya nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere ihe ị kwesiri; Achọrọ m ka ị nwekwuo ịhụnanya dị nro karịa, ma nke a ị ga-abịakwute m, ebe ọ bụ na ịhụ gị n'anya na iburu Scapular gị dị nsọ bụ ihe akara aka akara ga-eduga, na amara nke Chineke na-enye naanị ndi choro izoputa.
Ya mere, ị nweta ihe ọ bụla sitere na Chineke, nye m amara a: ka obi m kpọọ oku n'ịhụnanya gị, dị ka i gosiri m; Na ahụrụ m gị n'anya dịka ezigbo nwa, ebe ọ bụ na ị hụrụ m n'anya nke ukwuu nne m nwere, yabụ na ijikọ gị maka ịhụnanya n'ụwa ebe a, agaghị m ekewapụ gị n'ebe ị nọ mgbe ebighi ebi.
Ekpere a nye Virgen del Carmen ka o ruo n’ịhụnanya ya siri ezigbo ike.
Inweta ezi ihunanya bu ihe anyi na acho mgbe nile na ndu anyi, tumadi mgbe abatagobela gi ma obu mgbe inoghi di mgbe ituchara di na nwunye.
N’otu uzo ekpere a dikwa ire n ’onodu ndia ebe inweta di n’otu n’iru negosiputa udi ihe isi ike ma obu n’onye obu ihe siri ike dapu n’iru ma obu merie mmadu, n’ekpere ndia ka inweta ma obu me ka ihu ha n’anya.
Cheta na ngwaagha ime mmụọ dị ike na anyị enweghị ike ileghara ha anya ọbụlagodi na anyị amaghị etu o si arụ ọrụ, ọ bụ atụmatụ dị ike anyị nwere ike iji n'oge anyị chọrọ ya na okwukwe na ntụkwasị obi na a ga-aza ekpere a n'ike.
Nwere ike ikwu ahịrịokwu anọ na-enweghị nsogbu.
Ha niile dị mma, ịrịọ maka enyemaka na axulio ma ọ bụ ihe ọjọọ ime nke ahụ karịa otu mgbe.
Were ike nke ekpere nye Nwa agbọghọ nke Carmen ịgbanwe ndụ gị.